बेलायतले ३०० जनामा कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण गर्दै – Sandesh Munch
बेलायतले ३०० जनामा कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण गर्दै
June 25, 2020 202
एजेन्सी, ११ असार । बेलायतले ३०० जनामा कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण गर्ने भएको छ । २०७७ जनावरमा सफल भएपछि ३०० मानिसमा कोरोना भ्याक्सिन परीक्ष गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ ।
लण्डनको इम्पेरियल कलेजमा ३०० मानिसहरूमा यो खोप परीक्षण गर्न लागिएको हो । प्राध्यापक रोबिन सटोक र उनका सहयोगीहरूको नेतृत्वमा यो परीक्षणको गरिँदै छ ।
यसअघि यो खोप जनावरमा परिक्षण गर्दा नतिजा सकरात्मक आएको थियो । यसले भाइरसविरुद्ध लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याएको पाइएको परिक्षणमा संलग्न चिकित्सहरु बताउँछन् ।
बेलायतकै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले बनाएका खोपको मानवमा परीक्षण भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । अहिले त्यसको तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने तयारी हुँदै छ ।
हाल संसारभरी १२० स्थानमा कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने प्रयास गरिँदैछ । तीमध्ये १३ स्थानमा यो क्लिनिकल ट्रायलसम्म पुगेको छ । यी १३ स्थानमध्ये पाँच चीन, तीन अमेरिका र दुई बेलायतमा छ । जबकी अष्ट्रेलिया, रुस र जर्मनीको एक–एक स्थानमा ट्रायल चलिरहेको छ ।
Prevआज चर्चित गायिका अन्जु पन्तको जन्मदिन
Nextचिनियाँ मिडियालाई कारबाही गर्दै अमेरिका
जन्मदिनमनाउने खर्चले दुबईमाअलपत्र चेलीलाई उद्धारगर्दै जिग्री
२४ घण्टामा को*रो*नाले १० को मृ*त्यु
यी हुन् करोडपति बनाउने ५ सपनाहरु, तपाइले पनि देख्नुभएको छ ?
भगवान शिवको प्रिय वनस्पति बेलपत्रका यति धेरै फाइदा
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9673)